Kurarama Ukraine - Mazano anobatsira kubva vadzidzi kuti vararame uye kudzidza muUkraine
Takabvunza vamwe vadzidzi vatorwa pamusoro vaigara Ukraine. Mumwe nomumwe wavo akadana mumwe chokwadi pamusoro wake achirarama munyika ino.
Heino ichi chokwadi:
1. Zviri chaizvoizvo mumwe nyika yakachipa muna Europe. muenzaniso: ini nehanzvadzi yangu mhenyu dzakanaka (nokuti Ukraine) 2-mukamuri mufurati uye mari chete $100 pamwedzi nokuti rendi. Heino yakawanda anobatsira Indaneti mabasa izvo zvinogona kubatsira kuwana pekugara chero muguta muUkraine. Asi kuvonga Ukrainian Munopinda Center, kuti imi kutibatsira kuwana seyi, nekuti hatidi kurarama hostel. Kunyange utilites vari zvakachipa chaizvo. We vachibhadhara: chakanakisisa cabel Indaneti, mweya, mvura, magetsi uye runhare. Uye isu kubhadhara chete $30 – $40 pamwedzi.
2. Ndinopedza chete $400 pamwedzi. Asi ndikabvarura kwazvo sandara iri nechepakati Kharkiv uye nguva dzose kuenda kumapati pa kwevhiki. Ndiri mukasaregerera mari, vane nguva mafaro, asi harisati zvakachipa. Ini kunyange kuisa vamwe mari okubhengi, nekuti handina kuda mari zvikuru pano sezvandakadzibvisa neni. Ndinoda nyika ino.
3. Chii Ndinoda muUkraine? Ndinorida kwazvo zhinji chikafu chiri zvakachipa chaizvo nenzira. mienzaniso: Chicken ari achitengeswa kana kobiri kana wose. It kazhinji Anomhanyira pakati 35 kuti 55 Grivnahs por Kilogram. [Panguva musi kunyora izvi, US Dollar ndewe 25 Grivnahs] Izvi akaenzanisa kuti asingasviki ipapo $2 por kilogram.] Fruit uye miriwo zviri nani anotenga, kunyanya apo mumwaka. Makerotsi kumhanya kumativi 4.50 kuti 6.50 Grivnahs nokuti churu. Kuti anoenzanisa kuti 25 cent por kilogram! Miriwo vari kutengeserana chaicho pano uye kazhinji yepamusoro. Theyre kazhinji dzabudapo akapfuma zvikuru makemikari ivhu.
4. kutakura. Sei aigona kuva zvakadaro zvakachipa? Ini mari chete $0.25 por imwe rwendo mumwe уnd muguta. Ndiri kugara Kharkiv. Ndakaenda Kiev mwedzi wokupedzisira kushamwari dzangu. Ini vakabhadhara chete $15 USD nokuti rwendo rimwe divi. Dzimwe nguva senga wakura, asi zviri HERE zvakachipa. Ndinoifarira.
5. Ground, Ko ukaona vakadzi wokuUkraine? (Isu makachengeta kutaura munyori). Ndivo yakaisvonaka kwazvo munyika. Kana youre rombo zvakakwana kuroora nomwoyo chendarama uye kwete goridhe-digger mumwe, zvichaita kuti achirarama yako muUkraine chaizvo nyore, asi yayo kwete zvachose zvakakodzera. Uye imi kunyange haufaniri kuwanikwa kurarama pamwe chete. Excellent nyika!
6. Vanhu vepo vanoona (kazhinji) pamusoro vashanyi kana vagari kubva kuneimwe nyika. Izvi hazvisi zvinowanzoitwa munyika dzakawanda munyika yose sezvo unogona kare ziva! Iri kubatsira rakakura!
7. Zviri nyore chaizvo kuwana nzvimbo apo munhu anogona kuchinja mari dzakawanda kusanganisira: U.S. Dollars, British Pounds, Rubles Russian uye, ehe saizvozvo, Maeuro. A vashomanana dzimwe mari anogona vakatsinhanisa pano asi mukutsinhana pfungwa navo havana kudaro nyore. izvi zvinosanganisira: Australia Dollars uye mafranc Swiss.
8. Bank mari kufarira chaizvo yepamusoro pano! Zviri nyore chaizvo kuwana inzwi uye akasimbisa nemabhangi, izvo kubhadhara 20.5% mubereko dzomunzvimbo mari. Both Raiffeisen (An yeAustria Bank iyo ebhizimisi pano) uye OTP (A Hungarian bhengi) yakavimbika zvikuru uye nyore muUkraine. Vabereki vangu chiitiko akandituma mari yavo kuvhura dhipozita kwavari. naka. ATMs zvinowanikwa zhinji dzomuNorth pamusoro pamaguta. (Asi unogona kuwana munhu ane mutauro Chirungu nezvechisarudzo).
9. Pane zvakawanda Super Markets vakapararira zvose pamusoro pamaguta uyewo wandisa maduku kumisika rakashama mhando uye kiosks pedyo munzvimbo dzose. Kunyange zvazvo siyana zvinogona kudzorwa, ari muzvitoro kazhinji nzvimbo nani kutenga zvigadzirwa hwakavimbika zvakanaka.
10. Ndinonzwa nani uye akachengeteka zvikuru pano kupfuura chero guta guru iri America kunyange usiku!
11. Kurapwa muUkraine (nokuti vagari) vakasununguka! Mumwe anoda chete kuripira nokuda mishonga uye kuyeuka zvinhu zvinodiwa kuti vachipe navo. Ndinoziva ichi ichokwadi sezvo ndaiva chiitiko kurishandisa ichangopfuura kuti headackes! The zvakanga nyanzvi uye nomazvo kunyange kana asina kushandisa noungwaru zvigadzirwa kuwanikwa kumwewo!
12. Real Estate anogona kutengwa pano (Dachias) nokuti sezvo shoma sezvo $4000 kuti $5000! Kazhinji A Dachia inzvimbo kubva zvishoma kubva muguta munyika pakururamisa kuti haasi kazhinji aiendeswa ose zuva mhenyu. A Dachia Kazhinji akaita inoyerera mvura (yemanyorero iri kunze chivakwa) uye magetsi. Kazhinji ane chete panze-imba sechimbuzi. Asi vanogona upgraded zvakaenzana inexpensively. Vazhinji vari kumbonyanya pedyo bhazi-Kumira. Real Estate muUkraine akamborara ane musoro kuwedzera vakanzwisisa ukoshi mukati kare 5 makore. An mufurati, riri muguta randinogara, kuti kutengeswa $5,000.00 5 Makore akapfuura zvino otengesa kuti kusvika uye mune zvimwe zviitiko kumusoro $40,000. A nokuzvininipisa yakatarwa uye zvishoma anogamuchirwa vakawanda vanofarira Western asi vachiri vakadzikama, kuderedzwa dungwerungwe mufurati kuchaita mari kuti zvikuru kana kupfuura.
13. Zvinowanzova nyore kuwana veko whod kunatsiridza hwavo Chirungu mutauro nemano. saka, yayo kwete kuoma kuwana kubhadharwa vadzidzi zvidzidzo Chirungu. The kuenda zvazvingava iri 100 Grivnahs paawa! Kana inenge $ 4.00 / awa. Izvi doesnt kutinhira kufanana zvikuru, asi yeuka kuti $4.00 anoenda yakawanda kure pano kupfuura yakawanda dzimwe nyika! Semuyenzaniso, ini kuwana mugore zvokubhadhara muripo mazai ari yunivhesiti yangu.
14. Vachisimbisa mu kana Russian kana Ukrainian haisi zvakakodzera kuti dzichengete zvinhu zvezuva nezuva akafanana kunotenga uye Inter kana intra guta pakufamba. Ini kushandisa zvakanaka zvakakwana ndoga ane Russian mashoko chete anenge 300 mashoko.
Admission.Center - kudzidza kunze Kwenyika
Last update:18 Kubvumbi 19